Bogga ugu weyn Waa Maxay Maalgashiga Kobaca Dakhliga? | Tilmaam Buuxa Oo Ku Saabsan Hantida Weyn
Helitaanka saami -qeybsiga waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dadku u maal -gashadaan suuqa saamiyada. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee soo wajahay maal -gashadaha cusub, ama kuwa isku dayaya inay koontaroolaan faylalkooda markii ugu horreysay, ayaa ah in adduunka maaliyadeed uu ka buuxo gabble.
Saami qaybsiga ayaa noqon doona tusaale. Ogaanshaha shirkadaha saami-qaybsiga saxda ah si ay u maal-gashadaan waa qayb aad muhiim ugu ah maalgelinta koboca saami-qaybsiga.
Baadhitaannadu waxay muujinayaan in suuqa saamiyada ee Maraykanku uu ahaa mid ka mid ah soo saarayaasha hantida muddada dheer ugu weyn taariikhda, isagoo duubay heer korodh sanadle ah oo qiyaastii ahaa 9% ilaa dhammaadkii 1800naadkii.
Saamiyada qaybsiga ayaa dhaqan ahaan doorbiday maalgashadeyaasha sababta oo ah waxay bixiyaan soo -celin dammaanad leh saamileyda, sida caadiga ah waxaa laga bixiyaa macaashka shirkadda sannad walba.
Istaraatiijiyaddiisu waa mid sahlan: waxaad soo iibsanaysaa saamiyada bixinaya saami -qaybsiga oo aad u kordhaysay faaiidooyinkaas sanado aad u tiro badan oo la soo dhaafay.
Akhri markaad ogaato wax walba oo ku saabsan maalgashiga kobaca faaiidada.
Waa Maxay Qaybinta?
Asal ahaan, saami -qeybsigu waa faa'iidadaada shirkad aad leedahay. Qasab maahan inaad aasaastid shirkad aad iska leedahay. Iibsashada saamiyada- saamiyada a shirkadda ku qoran liiska dadweynaha sidoo kale wuxuu ku siinayaa lahaanshaha shirkad.
Beddelkii iibsiga saamiyada, shirkadu waxay ku siinaysaa xuquuqda aasaasiga ah. Marka hore, waxaad leedahay fikrad ah xulashada guddiga agaasimayaasha ee shirkadda, Kadibna waxaa lagu siinayaa qayb ka mid ah faa'iidada shirkadda sida uu oggolaaday guddiga maamulka.
Lacag bixintaan waxaa lagu magacaabaa saami qaybsiga. Sidaa darteed, qaddarka saami -qaybsiga ee aad heshaa waxay ku xiran tahay tirada saamiyada aad ku leedahay shirkadda. Tusaale ahaan, haddii shirkadu bixiso 10 senti halkii saamiga, maalgashade 100 saamiyo leh wuxuu heli doonaa $ 10 lacag caddaan ah. Saami qaybsiga waxaa lagu bixin karaa lacag caddaan ah ama qaab kayd dheeraad ah
Saami qaybsigu wuxuu noqon karaa ikhtiyaarka hawlgabka wanaagsan ilaa intaad samaynayso xulasho caqli leh. In badan oo saami -qeybsiga aad dib u maalgashato, ayaa saamiyada badan aad leedahay. Tani waa sababta fure u tahay in dib loo maalgeliyo saami -qeybsigaan. Si kastaba ha noqotee, saami qaybsiga gabi ahaanba lama dammaanad qaado maadaama ay ku jiraan naxariista guddiga agaasimayaasha.
Waxaa jira saddex nooc oo saami qaybsiga caadiga ah. Waxaa ka mid ah;
#1. Qeybinta Lacagta
Kani waa bixinta caadiga ah ee qaybtaada faa'iidada shirkadda.
#2. Saami qaybsiga
Kani waa marka shirkadu go'aansato inay siiso saamileyda saamileyda iyadoo u oggolaanaysa qayb ahaan ama qayb dhan saami kasta oo ay leedahay.
#3. Saami qaybsiga aan caadiga ahayn
Markay shirkadu soo gabagabeyso inay siiso saamilayda lacag caddaan ah, waxaa loogu yeeraa saami qaybsiga aan caadiga ahayn.
Investopedia waxay sheegaysaa in saami-qaybsigu yahay qiyaasta soo-noqoshada saamiga-kaliya ee maalgashiga saamiyada. Maadaama wax -soo -saarku ku salaysan yahay qiimaha saamiyada, wuu is bedbedeli doonaa waqti ka dib.
Saami -qaybsiga waxaa loo xisaabiyaa sida; saami -sannadeedka saamiga/qiimaha saamiga.
Saami qaybsiga waxaa lagu cabiraa boqolley. Waa saamiga inta shirkaddu bixin doonto qiimaha saamiyada.
Waxaa jira afar taariikho oo muhiim ah in la xuso oo ku saabsan saami -qeybsiga. Taariikhahaasi waxay kala yihiin;
#1. Taariikhda cadeynta
Tani waa taariikhda shirkadu ku dhawaaqday saami qaybsiga waana in ay ansixiyaan saamileyda.
#2. Taariikhda diiwaanka
Tani waa taariikhda ay shirkaddu diiwaangeliso inaad adigu qayb ka tahay daneeyayaasheeda si aad u hesho saamiga.
#3. Taariikhdii hore ee saami qaybsiga
Taariikhda saami qaybsigii hore waxaa la dejiyaa hal maalin shaqo ka hor taariikhda diiwaanka. Waa marka u -qalmitaanka saami -qaybsigu dhammaado. Haddii aad iibsato saamiyada taariikhdan ama ka dib, uma qalantid bixinta saami qaybsiga.
Dadka saamileyda ah ee shirkadaha bixiya saami qaybsiga ayaa sida caadiga ah xaq u leh inta ay wali leeyihiin saamiga kahor taariikhda saami qaybsiga.
#4. Taariikhda lacag bixinta
Tani waa taariikhda marka saamilaydu helaan lacagta saami qaybsiga. Mararka qaarkood, shirkaddu waxay dooran kartaa inay ku bixiso saami -qeybsiga qaabka saamiyada.
Maxay Shirkaduhu u Bixiyaan DIvidends?
Maalgashadayaashu waxay raadiyaan shirkado leh diiwaangelin la xaqiijiyay oo ah kororka saami qaybsiga sannadihii la soo dhaafay maxaa yeelay kororka saami -qeybsigu wuxuu muujinayaa in caafimaadka maaliyadeed ee shirkaddu uu hubsan yahay.
Sidaas darteed, shirkaduhu waxay bixiyaan saamiyo si ay u soo jiitaan maalgashadayaasha una kordhiyaan qiimaha saamiga. Waxay bixiyaan saami -qaybsiga ka dib markay daboolaan kharashaadkooda iyo dib -u -maalgelinta ganacsiga. Shirkadaha waayeelka ah ayaa aad looga filayaa inay bixiyaan saami -qaybsiga maxaa yeelay waxay u baahan yihiin dib -u -maalgelin raasumaal oo yar. Sidaa darteed, waxay koraan saami qaybsigooda sanadlaha ah waxayna la wadaagaan faa'iidada saamileyda.
Sidaa darteed waa muhiim inaad ka digtoonaato markaad dooranayso maalgashiyada.
Fiiro gaar ah: Shirkadaha ay soo waajahdo culeys maaliyadeed waxay u badan tahay inay jaraan saami -qeybsigooda ama aysan bixin haba yaraatee. Tani waxay farriin taban u diraysaa maalgashadayaasha kuwaas oo iyaguna iibiya maalgashigooda si ay uga fogaadaan khasaare maaliyadeed oo culus.
Waa Maxay Maalgashiga Kobaca Dakhliga?
Maalgelinta kobcinta qaybsiga waa farsamo maalgelin hawlgal ah oo ku lug leh iibsashada iyo lahaanshaha saamiyo kala duwan si aad dakhli joogto ah uga hesho maalgelintaada. Dakhligani waa ka sokow koritaan kasta oo aad waayo -aragnimadaada haysato maaddaama kaydka ku jira uu qiimo yeesho.
Maalgashadayaasha koboca qaybsiga waxay dhisaan faylalka maalgashiga aasaasiga ah iyagoo raadinaya shirkado leh taariikh raadin ah oo bixisa saamiyo la isku halleyn karo oo sii kordhaya sanadihii la soo dhaafay. Shirkadaha la kulma koboc sannado badan, waxay daboolaan kharashaadkooda, welina waxay leeyihiin socod joogto ah oo lacag caddaan ah marka la barbar dhigo sanadkii hore waxaa loo tixgeliyaa inay u wanaagsan yihiin maalgelinta kobaca macaashka. Shirkadahaani waxay si tartiib tartiib ah u kobciyaan lacagaha saami qaybsiga sababtoo ah koritaankooda joogtada ah.
Maalgelinta kobcinta qaybsiga ayaa iyaduna u dhiganta waqtiga. Daraasad ayaa muujineysa koror 82% ah oo ah heerka saami-qeybsiga oo dib loo maalgaliyay muddo 50 sano ah. Tani waxay ka dhigan tahay shirkad leh saami qaybsiga bilowga ah oo yar, qiimaha saami qaybsiga bilowga ah wuxuu u ekaan karaa mid aan muhiim ahayn. Si kastaba ha noqotee, uruurinta saami -qeybsigaan sanadihii la soo dhaafay iyo dib -u -maalgelinta waxay siineysaa qaddar -qeybin aad u qiimo badan.
Xeeladaha Maalgelinta Kobcinta Qaybsiga
Waxaa jira laba istaraatiijiyad maalgashi kobcinta saami qaybsiga oo saamilayda maalgashadayaasha bartilmaameedsanayaan.
Saami qaybsiga sare
Heerka koritaanka saami qaybsiga oo sarreeya.
#1. Waxsoosaarka Qaybsiga Sare
Istaraatiijiyadani waxay ku saabsanaanaysaa shirkadaha dib -u -dhaca leh oo leh lacag caddaan ah oo ku filan. Shirkaduhu waxay maalgeliyaan lacag -bixinno saami -qaybsiga sare ah waxayna markeeda dakhli degdeg ah u abuuraan maalgashadayaasha. Waxaa muhiim ah in maal -gashadayaashu ay ogaadaan sababta dhabta ah ee ka dambaysa wax -soo -saarka saami -qaybsiga sare oo ay go'aamiyaan haddii ay joogto tahay.
#2. Heerka Kobaca Qaybsiga Sare
Farsamadan, maalgeliyuhu wuxuu iibsadaa saami qaybsiga oo ka hooseeya shirkado si dhakhso ah u koraya sannado badan. Istaraatiijiyadani waxay abuurtaa dakhli muddo dheer ah.
Tusaalaha habboon ee xeeladaha maalgelinta kobcinta saami qaybsiga waa sida soo socota;
Hantida XYZ waxay leedahay saami dhan 4.00%. Saami -qaybsiga waxaa sannad walba lagu kordhiyaa 6% saamiga lacag -bixintooduna waa 70%.
Hantida 123 waxay leedahay saami qaybsiga 1.00%. Saamiga lacag -bixintu waa 15% waxaana sannad walba la kordhiyaa 20%.
Haddii aad doorato ikhtiyaarka labaad, waxaad ku dambayn doontaa soo saarista dakhli dheeraad ah mustaqbalka fog marka loo eego Stock XYZ. Tusaale kale oo wax ku ool ah waa suuqa saamiyada ee Mcdonald.
Maalgashadayaasha saami qaybsiga kala duwan ayaa dooran kara hal istaraatijiyad midka kale. Go'aankani wuxuu ku xiran yahay haddii dakhliga la soo saarayo uu yahay mid gaaban ama mid dheer.
Iyadoo aan loo eegin haddii aad maalgashato shirkado leh wax -soo -saar sare ama kuwa leh lacag -bixinno sii kordhaya, maalgelinta saami -qaybsigu waxay haysaa hab xooggan oo dakhli lagu kasbado.
Istaraatiijiyadaha Hoosaad ee Maalgelinta Kobcinta?
Istaraatiijiyaduhu way kala duwan yihiin kuwa maal -gashadeyaasha ah ilaa kuwa wax maal -galiya. Si kastaba ha ahaatee, xididka farsamooyinka oo dhan ayaa ku wareegsan waxyaabaha soo socda;
Helitaanka iyo dhisidda saamiyada shirkadaha kor u qaada dakhligooda sannad kasta
Iibsashada saamiyada qaybaha kala duwan si looga fogaado ku tiirsanaanta hal qayb oo dhaqaalaha ah.
Xaqiijinta koboca saami qaybsiga waxaa kafaala qaaday macaash, ee ma aha dayn.
Horumarinta xiriir wadaagga muddada -dheer ee shirkadda ayaa kaa dhigaya inaad u -qalanto canshuuraha dib loo dhigay waxayna kordhisaa kobaca raasumaalkaaga.
Sidee Loo Bilaabaa Maalgelinta Kobcinta Qaybsiga?
Maadaama aad tahay maalgaliye, waxa kuugu muhiimsan ayaa ah inaad dakhli badan ku abuurto maalgelintaada. Si kastaba ha noqotee, maalgelinta kobaca macaashka, waa inaad sameysaa doorashada saxda ah ee maalgashiga. Si aad u bilowdo maalgelinta kobaca saami qaybsiga, waa inaad tan samaysaa.
#1. Checkmate Shirkadda
Tallaabada ugu horreysa ee saami -qaybsiga maalgelinta kobaca waa in aad shirkadda ka hubiso saddexdan arrimood.
Ganacsi adag oo dhisan
Waxay u badan tahay inay kor u qaadaan dakhligooda sannad walba
Waxay u badan tahay in la yareeyo ama la hakiyo saami -qeybsigooda waqtiga.
#2. Dooro Istaraatiijiyadda Maalgelinta Qaybsiga
Go'aanso haddii aad maalgashan doontid adiga oo adeegsanaya istaraatijiyadda dhalidda sare ama istaraatijiyadda heerka koritaanka sare.
#3. Dooro Habka Maalgelinta
Dooro haddii aad doonayso;
Si Toos Ah U Iibso Kaydka-Bixinta Saami-qeybsiga ama
Sanduuqyada Iskuduwaha iyo Sanduuqa Traded Exchange (ETF)
Iibsashada Kaydka-Qaybinta Tooska ah
Maalgaliye ahaan, waxaad go'aansan kartaa inaad fuliso cilmi -baarisyadaada oo aad si toos ah u maal -gasho shirkad. Waxaad abuuri kartaa faylalka maalgashigaaga oo ku saleysan ujeeddooyinkaaga-taas oo ah, ama saami qeybsiga ama kobaca raasamaalka. Go'aankani wuxuu ku siinayaa xakamaynta ugu badan ee qaybaha faylalka maalgashigaaga.
Helitaanka saamiyada si toos ah shirkad macnaheedu waa inaad maalgashan lahayd shirkado buuxiya shuruudahaaga. Waxa kale oo ay ku siinaysaa waayo-aragnimo gacan-ku-haynta ah oo ah ganacsade saamiyada ah iyo xeerka “ma jiro ujrooyin maamul”.
Diirada ugu weyn ayaa ah haddii aad dhisi karto oo aad sii wadi karto faylalka maalgelinta maadaama ay la imaaneyso culeysyo badan
Sanduuqyada wadajirka ah iyo ETF
Habka ugu sahlan ee lagu heli karo kobacaaga saami-qaybsiga waa in la maalgaliyo maaliyadaha wadaagga ah iyo lacagaha is-weydaarsiga (ETF). Halkan, waxaad marin u heli kartaa maareyn shaqeysa oo ka timaada maareeyayaasha saamiyada xirfadda leh. In kasta oo maamulku ku yimaado lacag, waxay kuu soo dhoweynaysaa ujeeddadaada.
Miisaaniyadda wadaagga ah ayaa u saamaxaysa maalgashadayaasha in ay gaaraan kala -duwanaansho degdeg ah. Waxay ku shaqeeyaan iyagoo ku mideynaya maalgashigaaga maal -gashade kale iyo helidda saamiyo shirkadeed oo badan si ay u fuliyaan istiraatiijiyadda maalgelinta. Waxay maalgashi ku samayn karaan 10 shirkadood ama ka badan, qaarkoodna waxaa ku jira ilaa 1,000 shirkadood.
Istaraatiijiyadaha maalgelinta ee maaliyaddu waa kuwo aad u kala duwan waxaana laga yaabaa inay ku siiyaan suuqyo siman oo aad aqoon yar u leedahay oo ay adkaan doonto in la baaro ama laga ganacsado. Maamulaha sanduuqa wadajirka ah wuxuu awood u leeyahay haynta sanduuqa, waxaad luminaysaa awoodda aad wax ugu beddeli karto hantidaada.
Qaar ka mid ah maalgelinta wadaagga ayaa sii dheeraada si ay u qaadaan 'khidmadaha maalgashiga ee hore' ilaa 5% maalgashigaaga kaas oo dumin doona raasamaalkaaga inta aadan xitaa bilaabin.
Iska ilaali lacagaha wadajirka ah ee kaa qaadaya khidmadda bilowga ah. Tani waxay ka soo horjeedaa halbeegga warshadaha, dalab kasta oo lagu soo dallacona wuxuu dirayaa calaamad fudud oo ah in sanduuqgu aanu doonayn inuu soo jiito 'lacag caqli leh'.
Maalgashadayaasha koboca qaybsiga waxay u eegaan faylalka tacliimeedkooda mashiin dakhli soo saara
Maalgashiga Kobcinta Dakhliga Ma Khatarbaa?
Saami qaybsiga gabi ahaanba lama hubo, maadaama ay ku xiran yihiin dhaqaalaha, shirkadda, iyo xaaladda suuqa saamiyada. Si kastaba ha ahaatee, hab wanaagsan oo lagu yarayn karo halista ayaa ah in laga digtoonaado shirkadaha leh saami qaybsiga sare. Celceliska wax -soo -saarka saami -qeybsigu wuxuu u dhexeeyaa 2% ilaa 5% iyadoo ku xiran xaaladaha suuqa saamiyada sida lagu arkay Tusmada S&P 500.
Marka, haddii aad la kulanto saamiyada saami -qaybsiga oo leh in ka badan 8% wax -soo -saarka saami -qaybsiga, waxaa lagugula talinayaa inaad ku samayso cilmi baaris qoto dheer shirkadahaas. Fursadaha ayaa ah inay ku jiri karaan xiisad maaliyadeed oo daran waxayna u baahan yihiin maalgashadayaasha inay maalgashadaan. Dakhliga ka soo baxa saami-qaybsiga oo aad u sarreeya badiyaa waa mid dhow- gaaban. Natiijooyinka ka soo baxa cilmi -baaristaadu waxay kuu suurtogelin doonaan inaad samayso doorashooyin caqli -gal ah
Maalgelinta kobcinta qaybsiga waa xalka muddada dheer. Waxay ku tiirsan tahay xulashada shirkado dhaafi doona inta kale ee suuqa saamiyada.
Sidoo kale, kaydka kobcinta saami-qaybsiga ayaa kaa caawin kara inaad iska ilaaliso is-beddelka maalinlaha ah ee waxyeellada leh oo laga yaabo inuu waxyeello u geysto, oo aan qofna si dhab ah u fahmin, oo beddelkeeda xoogga saaro maalgashiga muddada fog.
Waxaan rajaynayaa inay tani kaa caawinayso go'aankaaga maalgashi.
DIB U QAADASHADA EDITOR
Waa maxay Hantida Guryaha Dijital ah? Sideen lacagtayda ugu maalgelin karaa?
10 Adeegyada Xulidda Lacag -La'aanta ugu Fiican
15 Siyaabaha Sharciga ah ee lacag loogu bixiyo lacag lagu sameeyo | Talada Khabiirka
Sida Loo Maalgeliyo Bilaabashada Saamiga Culus 2022
Fahamka sida loo maalgashado ganacsiyada waa tallaabada ugu horreysa ee saami weyn lagu yeelanayo marka shirkaddu…